Sandals Resorts International inorangarira muvambi Gordon "Butch" Stewart
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Sandals Resorts International inorangarira muvambi Gordon "Butch" Stewart
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kukudza maSandals Resorts International Muvambi uye Sachigaro anononoka, ese maSandals Resorts nemaBeach Resorts vachadada kuratidza mufananidzo wakakomberedzwa weiyo Hon. Gordon "Butch" Stewart sechiyeuchidzo chenhaka yake yekusingaperi.
Sandals Resorts International (SRI) ichayeuka hupenyu hwakanonoka kuvamba uye sachigaro Gordon "Butch" Stewart munhevedzano yezvinhu-zvivakwa nedigital zviitiko zvakaitwa kukudza zuva rekuzvarwa kwaVaStewart.
Sandals Resorts inozivisa zvirongwa zvakagadzirirwa kukudza muvambi pazuva rake rekuzvarwa raJuly 6.
An "Ocean Lookout" ichave ichizarurirwa kunzvimbo imwe neimwe yekutandarira nepamaonero anoshamisa ekurangarira Iye Hon. Gordon “Butch” rudo rwegungwa.
Imwe neimwe nzvimbo yekutandarira ichagamuchirawo yakanyatsogadzirirwa foto yemuvambi iyo vashanyi, nhengo dzeboka, nevashanyi vanogona kuona.
Pane zvivakwa, nzvimbo yega yega inoratidzwa nemufananidzo wakakomberedzwa wemuvambi unozoratidzwa munzvimbo ine mukurumbira yekutarisa nevaenzi, nhengo dzechikwata, uye vashanyi. Uye zvakare, imwe neimwe yekutandarira ichaunza iyo Ocean Lookout, inzvimbo inodiwa inozivikanwa pahotera yega yega yaive yakakosheswa naVaStewart nekuona kwayo kunoshamisa kwegungwa. Zvese Ocean Lookout ichaperekedzwa nechikwangwani chine chinyorwa chinotevera: “'Pfungwa yangu yeumbozha iri kugungwa… '-Gordon "Butch" Stewart, Muvambi, Sandals Resorts. Sezvazvaive zvakaita muvambi wedu, dai maCaribbean ave manyuko asingagumi ekurudziro, rugare, uye mufaro wakachena. ”
Sandals Resorts International ichafumura "Ocean Lookout" pane imwe neimwe nzvimbo dzayo dzekudyara mhiri kweCaribbean - nzvimbo yakakosha ine maonero anokatyamadza - kurangarira The Hon. Gordon “Butch” rudo rwegungwa. Kufananidzirwa Pano: kusingaperi kwemakungwa maonero kuSandals Ochi Beach Resort iri muOcho Rios, Jamaica, padhuze nepakakurira Gordon "Butch" Stewart.
"Idzi inzira diki dzekukudza zvinhu zvikuru zvaive zvakakosha kuna baba vangu," akadaro sachigaro mukuru weSRI, Adam Stewart. “Mufananidzo wababa vangu, unoratidzwa nerukudzo munzvimbo dzatinogara, hwakakosha. Inotaridza pasi rose kuti kuseri kwemashizha edu, tiri chizvarwa chechitanhatu chemhuri yeJamaican ine midzi yakasimwa muCaribbean. Ndokusaka kumisikidza nzvimbo ine inoshamisa maonero egungwa yaive yakakosha. Zvese zvatinoita zvinotangira panosangana gungwa nejecha. Kunze kwekuve mutungamiri wezvekushanya, baba vangu vakakurira pamhenderekedzo yegungwa uye vakafarira zvinhu zvakapusa muhupenyu. Aida kukomberedzwa negungwa, achitaurirana neshamwari uye nekutamba dominoes. Mhuri neCaribbean ndizvo zvatiri, uye akatipa izvozvo. Muchokwadi, imwe yemanzwiro ake aakanyanya kufarira 'aida kuti vaenzi vedu vanzwe semhuri kana vainavo.' Nhasi, tinotora nguva ino kumupemberera nekukudza kusuwa kwake, ”akadaro Stewart.
Avo vanotevera mabhenji edhijitari chiteshi vane mukana wekunzwa pfungwa kubva kuna Gordon "Butch" Stewart mumashoko ake ega uye kudzidza zvakawanda nezve hupenyu hwake nekushanyira "Kuyeuka Gordon "Butch" Stewart, peji repamhepo rinopemberera nyaya, kukanganisa uye zviyeuchidzo zvemuoni uyu wechokwadi.
Sandals® Resorts inopa vanhu vaviri murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisira® zororo ruzivo muCaribbean.
Iine gumi nematanhatu inoshamisa marongero egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, uye gumi nematanhatu.th nzvimbo inouya kuCuracao Chitubu 2022, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe kambani yekutandarira pasi.
Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 5-Nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet yakasarudzika maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakagadziriswa Michato ese eSandals Resorts anosarudzika.
Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, yakagadziriswa nekambani matanho ehutano pamwe nekuchengetedza akagadzirirwa kupa vashanyi kuvimba kwakanyanya pavanenge vachienda kuzororo kuCaribbean.
Sandals Resorts chikamu chemhuri-muridzi Sandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemushakabvu Gordon "Butch" Stewart, iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo inotungamira yeCaribbean kirisheni yese-inosanganisira nzvimbo yekushanyira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya www.mumusi.com.